ဒေဝါလီခံလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Gionee ကုမ္ပဏီ | MyTech Myanmar
ဒေဝါလီခံလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Gionee ကုမ္ပဏီ
Gionee ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဖုန်းတော်တော်များများ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း ခေတ်စားလိုက်ပါသေးတယ်။ ခုချိန်ထိ မှတ်မှတ်ရရ သိကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိသလို တစ်ချို့လည်း မသိသလောက်ပါပဲ။ ဒီနေ့ကတော့ Gionee ကုမ္ပဏီအတွက် သတင်းဆိုးတစ်ခုတော့ ထွက်လာတဲ့ နေ့ပါ။ သတင်းဆိုးကြီးကတော့ Gionee ကုမ္ပဏီကြီး ဒေဝါလီခံလိုက်ရတာ တရားဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။
Shenzhen တရားရုံးကတော့ Huaxing ဘဏ်ကတင်ထားတဲ့ ဒေဝါလီခံဖို့ ခွင့်ပြုလွှာကို လက်ခံလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် Gionee အနေနဲ့ ဒေဝါလီခံရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ၃နှစ်-၅နှစ်အတွင်းမှာ ပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်မယ်လို့ Founder Liu Lirong က တွေးခဲ့တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီကို ပြန်လည်ဖွဲစည်းဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲ အကြံပေးတွေ ငှားရမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် အကြွေှးရှင်ပေါင်း ၆၄၈ ယောက်စီ တရုတ်ယွမ် ၂၀.၂ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာပေါင်း ၃ဘီလီယံ) အကြွေးပေးခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီတန်ဖိုးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က ဘဏ်ကို အကြွေးဆပ်လိုက်ရတာပါ။ ဒီနှစ်အစပိုင်းကလည်း Supplier တွေဆီရော ကြော်ငြာအေဂျင်စီတွေကိုပါ ငွေမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
တစ်ချို့ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေ စမတ်ဖုန်းလောကကနေ ထွက်ခွာသွားရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်က တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ နည်းပညာအသစ်အသစ်တွေ မလုပ်နိုင်တော့လို့လို့ ဆိုပေမယ့် Gionee အတွက်တော့ အဲဒီအကြောင်းရင်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ အများကြီး ဖြစ်နေတာကို ပိုဆိုးသွားစေတာက Gionee ရဲ့ တည်ထောင်သူ ဥက္ကဌ Liu က ကာစီနိုမှာ တရုတ်ယွမ် ၁ဘီလီယံတောင် ရှုံးသွားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ပါ။။ ဒေါ်လာနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် ဒေါ်လာ ၁၄၄သန်းဆိုတဲ့ ပမာဏက တော်တော်ကြီးများပါတယ်။
သူကတော့ ကုမ္ပဏီငွေတွေကို သုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ ထွက်ဆိုခဲ့တာက ကုမ္ပဏီငွေကို ချေးခဲ့တယ်လို့ပဲ ကွေ့ဝိုက်စဉ်းစားရမလား? ဘယ်လိုပဲနေနေ ကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တော့ ထွက်လာဦးမှာပါ။
Liu ကတော့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ 2013 ကနေ 2015 အတွင်း တစ်လကို ဒေါ်လာ ၁၄သန်းလောက် ရှုံးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့၂နှစ်အတွင်းမှာ အရှုံးငွေပမာဏက ၂ဆတောင် တက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲ ဒေဝါလီခံခံ Gionee ဆိုတဲ့ နာမည်လေးကတော့ ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပါပဲ။
Gionee ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ဖုနျးတျောတျောမြားမြား ကြှနျတျောတို့ဆီမှာလညျး ခတျေစားလိုကျပါသေးတယျ။ ခုခြိနျထိ မှတျမှတျရရ သိကွတဲ့သူတှလေညျး ရှိသလို တဈခြို့လညျး မသိသလောကျပါပဲ။ ဒီနကေ့တော့ Gionee ကုမ်ပဏီအတှကျ သတငျးဆိုးတဈခုတော့ ထှကျလာတဲ့ နပေ့ါ။ သတငျးဆိုးကွီးကတော့ Gionee ကုမ်ပဏီကွီး ဒဝေါလီခံလိုကျရတာ တရားဝငျဖွဈသှားပွီဆိုတဲ့အကွောငျးပါပဲ။
Shenzhen တရားရုံးကတော့ Huaxing ဘဏျကတငျထားတဲ့ ဒဝေါလီခံဖို့ ခှငျ့ပွုလှာကို လကျခံလိုကျပွီ ဖွဈတဲ့အတှကျ Gionee အနနေဲ့ ဒဝေါလီခံရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့ ၃နှဈ-၅နှဈအတှငျးမှာ ပွနျလညျနာလနျထူလာနိုငျမယျလို့ Founder Liu Lirong က တှေးခဲ့တဲ့အတှကျ ကုမ်ပဏီကို ပွနျလညျဖှဲစညျးဖို့ ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျကပဲ အကွံပေးတှေ ငှားရမျးခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ အကွှေှးရှငျပေါငျး ၆၄၈ ယောကျစီ တရုတျယှမျ ၂၀.၂ ဘီလီယံ (ဒျေါလာပေါငျး ၃ဘီလီယံ) အကွှေးပေးခဲ့ရပွီး အဲ့ဒီတနျဖိုးရဲ့ တဈဝကျလောကျက ဘဏျကို အကွှေးဆပျလိုကျရတာပါ။ ဒီနှဈအစပိုငျးကလညျး Supplier တှဆေီရော ကွျောငွာအဂေငျြစီတှကေိုပါ ငှမေပေးနိုငျခဲ့ပါဘူး။
တဈခြို့ စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီတှေ စမတျဖုနျးလောကကနေ ထှကျခှာသှားရနိုငျတယျဆိုတဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြက တီထှငျဖနျတီးမှုတှေ နညျးပညာအသဈအသဈတှေ မလုပျနိုငျတော့လို့လို့ ဆိုပမေယျ့ Gionee အတှကျတော့ အဲဒီအကွောငျးရငျးကွောငျ့ မဟုတျပါဘူး။
ဒီလို ငှကွေေးအခကျအခဲတှေ အမြားကွီး ဖွဈနတောကို ပိုဆိုးသှားစတောက Gionee ရဲ့ တညျထောငျသူ ဥက်ကဌ Liu က ကာစီနိုမှာ တရုတျယှမျ ၁ဘီလီယံတောငျ ရှုံးသှားတဲ့ကိစ်စကွောငျ့ပါ။။ ဒျေါလာနဲ့ တှကျကွညျ့ရငျ ဒျေါလာ ၁၄၄သနျးဆိုတဲ့ ပမာဏက တျောတျောကွီးမြားပါတယျ။
သူကတော့ ကုမ်ပဏီငှတှေကေို သုံးခဲ့တာမဟုတျဘူးလို့ ထှကျဆိုခဲ့တာက ကုမ်ပဏီငှကေို ခြေးခဲ့တယျလို့ပဲ ကှဝေို့ကျစဉျးစားရမလား? ဘယျလိုပဲနနေေ ကုမ်ပဏီဒဝေါလီခံရတဲ့ အကွောငျးရငျးက ဇာတျလမျးတဈပုဒျတော့ ထှကျလာဦးမှာပါ။
Liu ကတော့ ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ 2013 ကနေ 2015 အတှငျး တဈလကို ဒျေါလာ ၁၄သနျးလောကျ ရှုံးနတောဖွဈပွီးတော့ ပွီးခဲ့တဲ့၂နှဈအတှငျးမှာ အရှုံးငှပေမာဏက ၂ဆတောငျ တကျလာခဲ့တယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဘယျလိုအကွောငျးရငျးကွောငျ့ပဲ ဒဝေါလီခံခံ Gionee ဆိုတဲ့ နာမညျလေးကတော့ ထာဝရပြောကျကှယျသှားတော့မှာပါပဲ။
MyTech Myanmar2018-12-19T23:35:46+06:30December 19th, 2018|Mobile Phones, News|